Ogaden News Agency (ONA) – Gudoomiyaha (UHO) Marwo Roda Ibrahim oo 5 guurada Ururka OYSU hambalyo u dirtay
Gudoomiyaha (UHO) Marwo Roda Ibrahim oo 5 guurada Ururka OYSU hambalyo u dirtay
Posted by Dayr	/ June 29, 2015
Gudoomiyaha Ururka Haweenka Ogaadeenya Marwo Roda Ibrahim C. Gurey (Afjano) oo ku hadlaysa magaca UHO ayaa hambalyo iyo bogaadin u dirtay Ururka OYSU oo 5 sano jirsaday.
Anigoo ah Roda Ibrahim C.Gurey kuna hadalay magacayga iyo magaca Ururka Haweenka Ogaadeenya waxaan hamablyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karin u dirayaa guud ahaan shacabka Ogaadeenya gude iyo dibadba gaar ahaan Ururka Midowga Dhalinyarada iyo Ardayda Ogaadeenya/ Ogaden Youth and Sudent Union (OYSU) oo xiligii la aas-aasay ay 5 sano ka soo wareegtay
Farxad weyn ayay noo tahay in uu Ururka OYSU 5 sano jirsday baahidii loo aas-aasayna uu daboolay runtii, aas-aaskii OYSU wuxuu ahaa mid ka mid ah guulaha waawayn ee uu shacabka Ogaadeenya gaadhay wuxuuna halganka xaqa ah ee dadka iyo dalka Ogaadeenya lagu xoraynayo ku soo kordhiyay cudud, caqli iyo cuud ay intaba firnfinrcooni xoogani weheliso.
Aas-aaskii OYSU kadib waxaa daafyaha caalamka laga dareemay dhaqdhaqaaq soofaysan oo si mintidnimo iyo isku tashi ku dhisan ula soo mutaxan dareen dhiifooni iyo hanweyni ah kaas oo ka turjumaya rabitaanka shacabka Ogaadeenya ee mudada dheer halganka qori isu dhiibka ah ku soo jiray waxaana OYSU ka argagaxay gumaysiga Ethiopia ee macangga ah.
OYSU waxay kordhiyeen niyad samidii shacbka Ogaadeenya ay halgankooda iyo hogaamintiisaba ku qabeen waana mida xaqiijisay in ay ONLF soo saartay jiilal mustaqbalkooda ka fikiraya hadafkooduna uu cadyahay sidoo kale OYSU waxay tusaale u noqdeen dhamaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo hirashada iyo hadafka toosan OYSU ku qancay kunabaraarugay.
Aas-aaskii OYSU kadib waxaa sii xoogaystay sarena u kacay dhamaan hawlaha halganka oo aan looga maarmin dadaalka, kartida iyo aqoonta dhalinyarada dhalinyaraduna waa muruqa iyo maskaxda dhabta ah ee dadka iyo dalka Ogaadeenya ay guusha karajaynayaan haduu rabbi garab qabto.
Waxaa xaqiiqo ah in umad waliba ay dhalinyaradeeda u hanweyntahay umad halgan ku jirtaana way ka sii xag jirtaa waxayna aad ugu tiirsantahay awoooda iyo aqoonta dhalinyarada sidaas darteed waxaan dhalinta OYSU ku boorinayaa in ay kaga dhabeeyaan qaadashaad go’aankooda ka dhashay diidmada gumaysiga iyo duilmiga joogtada ah ee shacbka Ogaadeenya lafac tirsaday.
Waxaan u rajayanaa OYSU iyo guud ahaan shacabka Ogaadeenya in ay midnimadooda ilaashadaan kana feejignaadaan tabaha iyo shirqoolada cadowga, waxaanan dhalinta OYSU kuladardaarmayaa in ay ku dadaalaan waxkasta oo iyaga iyo walaalohooda Soomaaliyeed isku soo dhawayn kara kana shaqeeyaan iskaashiga iyo isku duubnaanta guud ahaan umada Soomaaliyeed.
Anigoo fursadan ka faa’iidaysanaya waxaan dhamaan shacabka Ogaadeenya meel ay joogaanba kula dardaarmayaa in loo dhabar adaygo hagardaamooyinka gumaysiga laguna sabbro dhibka iyo xanuunka goor walba taagan ee gumaysiga Ethiopia ee manaxaanka ah uu shacabka ku hayo si gooni ahna dadka biri magaydayga ah uu ugu bartilmaameedsado.
Roda Ibrahim C.Gurey